အကျိုးသက်ရောက်မှုပြည့်သော အရောင်းမြှင့်တင်ရေး သတင်း
အရောင်းမြှင့်တင်ရေး မန်နေဂျာဖြစ်ရခြင်း၏ ကောင်းမွန်သည့်အချက်များမှ တစ်ခုမှာ သင်၏ အဖွဲ့အစည်းအား ရည်မှန်းချက်အား -ရရှိစေရန်နှင့် ကျော်လွန်နိုင်ရန်- ကူညီပေးခြင်းဖြစ်ပါသည်။
ကောင်းမွန်သော အရောင်းမြှင့်တင်ရေး အခြေအေနများသည် ပိုမိုကောင်းမွန်သော အရောင်းမြှင့်တင်ရေး ဝန်ထမ်းများဖြင့် စတင်ခြင်းဖြစ်ပါသည်။
Hebt u moeite om leads om te zetten in verkoop? Of wilt u gewoon meer verkopen? Het kan door de slimme consument van vandaag komen, maar het kan net zo goed door uw verouderde technieken komen. Omdat de moderne consument heeft geleerd om verkoop te blokkeren, zijn nieuwe verkooptrainingen en -technieken ontstaan. Het goede nieuws is: we kunnen helpen de verkopers van vandaag en morgen te creëren.
ရောင်းအားမြှင့်တင်ရေး များအတွက် ခေတ်အသစ် ရှာဖွေခြင်း
ဖောက်သည်တစ်ဦး မှ အရောင်းမြှင့်တင်ရေး ဝန်ထမ်းတစ်ဦးမှ မပါဘဲ ဈေးဝယ်မှု လုပ်ငန်းစဉ်ကို ၇၀ ရာခိုင်နှုန်း ပြီးဆုံးသွားပါက၊ အွန်လိုင်းမှတဆင့် အခြားသော လူတစ်ဦးတစ်ယောက်မှ မပါဘဲ ပြီးဆုံးသွားပါက ရိုးရာ ကူးပေါင်းရေးစကေးသည် လုံးဝအသက်ဝင်တော့မည်မဟုတ်သည်မှာ ရိုးရှင်းစွာပင်သိနိုင်ပါသည်။ ထိုအကြောင်းအရာများကြောင့် ယခင်ခေတ်ကာလများတွင် မပေါ်ခဲ့ဘူးသော အရောင်းမြှင့်တင်ရေး သင်တန်းများနှင့် နည်းလမ်းများကို ယခု ဒီဂျစ်တယ်ခေတ်အတွက် ဖောက်ထုတ်ကြရန် လိုအပ်ခြင်းဖြစ်ပါသည်။
ကွန်ုပ်တို့၏ အရောင်းမြှင့်တင်ရေး သင်တန်းမှာ သင့်အား ကူညီနိုင်သည်များမှာ-
ခေါင်းဆောင်ခြင်းဖြင့် ပိုမိုကောင်းမွန်သော ဆက်ဆံရေး ထူထောင်ရန်
လက်ရှိ ဖောက်သည်များမှသစ္စာရှိမှုကို တည်ဆောက်ရန်
ဝယ်သူ၏ ဖော်ထုတ်မပြနိုင်သော လိုအပ်ချက်ကို ဖော်ထုတ်နိုင်ခြင်း
ရောင်းအားကောင်းလာမည့် အခြေအနေများကို ပြောင်းလဲဆောင်ရွက်သွားနိုင်ရန်
မျှော်လင့်ထားသော ရည်မှန်းချက်များအတွက် အရောင်းမြှင့်တင်မှု လေ့ကျင့်ရေးများ
ကောင်မွန်စွာဆောင်ရွက်န်ိုင်သော အရောင်းမြှင့်တင်ရေးဝန်ထမ်းများသည် အင်တာနက်မှ မဆောင်ရွက်နိုင်သည့် အချက်အလက်များကို ဆောင်ရွက်ခြင်းဖြစ်သည်။ ထိုသူများသည် အရောင်းမြှင့်ရေးကို ဖြစ်ပေါ်စေသည့် အခြေအနေ ဆက်ဆံရေး တည်ဆောက်နေကြခြင်းဖြစ်သည်။ Dale Carnegie၏ အရောင်းမြှင့်တင်ရေး သင်တ်းများမှတဆင့် ရောင်းအားမြှင့်လာနိုင်သည့် လမ်းကြောင်းများကို ပိုမိုသင်ကြားနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ အဘယ့်ကြောင့်ဆိုသော် ခိုင်မာသော ဆက်ဆံရေးများသည် သစ္စာရှိသော ရင်းနှီးမှုအဖြစ် ဖြစ်တည်စေပြီး ပုံမှန်ဖြစ်သည့် ရောင်းဝယ်မှုဖြစ်စေကာ ထို့အရာမှ သင်၏ ရည်မှန်းချက်ကို ကျော်လွန်သွားနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။
အရောင်းမြှင့်တင်ရေး သင်တန်းများတွင် ယနေ့ပင် အမည်စာရင်းပေးသွင်းပါစို့
အရောင်းပိုင်း သင်တန်းများအား ရှာကြည့်ပါ
သင်စိတ်ပါဝင်စားနိုင်သော အရောင်းမြှင့်တင်ရေး ရင်းမြစ်များ-
သံသယတိုးပှားလာနပွေီး အမွဲပွောငျးလဲမှုသာသခြောသော လုပျငနျးခှငျတှငျ ၀နျထမျးမြားသညျ ဘယျသူဘယျဝါကို အားကိုးရမှနျးမသိကွပါ။ ဤစာတမျးသညျ ယုံယုံကွညျကွညျအားကိုးနိုငျသော၊ ရလဒျကို ဦးစားပေးသော ခေါငျးဆောငျတဈယောကျဖွဈခွငျး၏ အဓိပ်ပာယျအမှနျကို ဖျောထုတျခွငျးဖွငျ့ ၄ငျးပွဿနာကို ဖွရှေငျးပေးပါသညျ။